Bixi nafaqo sanadka oo dhan: Noqo deeq bixiye joogta ah! - Cuntooyinka giraangiraha
Bixi nafaqada sanadka oo dhan: Noqo deeq bixiye waara!
Xilli kasta ha noqotee, gaajadu nasasho ma qaadato. Taasi waa sababta aan kaa codsaneyno inaad noqotid deeq bixiye waara maanta!
Markaad noqoto deeq bixiye waara, waxaad ballan qaadaysaa inaad bil kasta ugu deeqo Cunnooyinka Lugaha Si otomaatig ah looga soo qaato kaarkaaga deynta ama kaarka. Waxaad kuheleysaa sahlanaanta inaad kaliya gasho macluumaadkaaga deeqda ah hal mar, adoo sameeynaya ballan qaad bille ah oo lagu taageerayo gaarsiinta cuntada nafaqada leh waayeelka u baahan!
Hadafkeenu waa in lagu daro 35 deeq bixiyeyaal cusub oo waara - heer kasta - ka hor dhamaadka xagaaga. Ma joogtaa
Noqo deeq bixiye waara maanta!
Tallaabada 1 ee 3
Waxaan jeclaan lahaa inaan sameeyo ...*
Deeqo Bille ah (Joogteyn ah)
Ku Bixinta Hal Mar
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku deeqo ...*
$30 = 1 todobaad oo cunto ah
$60 = 2 todobaad oo cunto ah
$90 = 3 toddobaad oo cunto ah
$120 = 1 bil oo cunno ah
$240 = 2 bilood oo cunto ah
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku bixiyo deeqdan sharaf ama xusuus qof.
Miyaad jeceshahay inaan kuu soo dirno shaqsiye sharafeedka ogeysiiska hadiyaddaada?*
Waxaan jeclaan lahaa inaan u diro ogeysiin saaxiibkey ama xubin qoyskeyga sharaf leh
Yaad jeceshahay inaan u dirno ogeysiiskan?
Cinwaanka ogeysiiska loo dirayo
Cinwaanka Jidka Cinwaanka Sadarka 2 Magaalada AlabamaAlaskaArizonaArkansasKaalifoorniyaColoradoConnecticutDelawareDegmada ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineGobolka MarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkWaqooyiga CarolinaWaqooyiga DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaJasiiradda RhodeKoonfurta CarolinaKoonfurta DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonGalbeedka VirginiaWisconsinWyomingCiidamada Qalabka sida ee AmeerikaCiidamada Qalabka Sida YurubCiidamada Baasifiga Gobol ZIP Code
Ma jiraa farriin aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto deeqdan?
Macluumaadka Kaarka Deynta*
Kaararka Amaah ee La Taageeray: American Express, Baro, MasterCard, Visa
Lambarka Kaarka Bisha010203040506070809101112 Sanadka20222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041 Taariikhda uu dhacayo Numberka Sirta Magaca Kaarka
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku biiro Metro Meals on Wheels Newsletter.